entuthukweni yezobuchwepheshe, ukuthuthukiswa emikhakheni ehlukahlukene umsebenzi, ngcono isiko jikelele - konke lokhu waphawula ngokuhamba ukuthuthukiswa ezakha kakhulu ezweni lanamuhla. Nokho, kuyinto - akubona bonke. Njengengxenye ukuvela izinhlangano nemisinga zenzeka noma kuvuselelwe yokuthi balwela kuqedwe ezithile unomphela, ngokuvumelana ababamele, wethonya elonakalisayo emphakathini isigaba. Enye yalezi ukunyakaza iyona Antifa - kuyinto omhlaba, uphumile ukulwa emelene yimuphi kuwukubonakaliswa wobushiqela.
Antifa - subculture, igama eligcwele okuyinto "anti-wobushiqela", ekuhlanganiseni zibuswe yayo abamele kwesokunxele bese olukhulu party kwesokunxele wemboni, kanye namaqembu azimele nezinhlangano lapho nokuqeda ukucwasa ngokohlanga futhi neo-nobuNazi.
Lo mqondo yethulwa e-Italy, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa uMussolini. Igama elithi "anti-amaFascist", "anti-wobushiqela" kwasho nezitha nomholi wezempi futhi umashiqela, nitshale izinhlelo kubo.
Kusukela ngo-1923, union efanayo babukhona nakwa-Germany. Amalungu ayo kwakungekaNkulunkulu iCommunist Party of Germany ngesikhathi Weimar Republic, kodwa kamuva baboshwa antifascist futhi Socialists. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, akekho futhi omunye kwakungafanele abavukeli, futhi akazange alwe wobushiqela njengoba enjalo, kodwa waphika ngokuya ikusasa okuqhubekayo futhi ngalwela izimiso le Weimar Republic. Lapho leli zwe eliholwa-Adolf Hitler, igama elithi sekulibalekile, iye yasetshenziswa kakhulu kuyaqabukela futhi kwakuhambisana nezinga ukumelana wamaKhomanisi.
Ngo-USSR anti-amaFascist - inqubomgomo impikiswano
Yebo, anti-wobushiqela yayikhona eSoviet Union ekulweni abahlaseli ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili, futhi, ngenxa yalokho, ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Ngokwesibonelo, iziboshwa eziningi ababeqeqeshwe futhi izifundo ukwelashwa emandleni anti-undlovukayiphikiswa, baba amaKhomanisi, ezifana isiboshwa sempi yeHungary Pal Maléter.
Nokho, izenzo ubuholi Soviet babe awuhambisani, okwakubekelwa ngobuciko esetshenziswa kuHitler naseJalimane lobuNazi njengoba debunking wawo wonke ukunyakaza. Ngakho, iSoviet Union wabuya amakhulu zezombusazwe abathutha zamaKhomanisi emuva ekhaya ezweni labo, lapho ungalindeli lutho ngaphandle sokuhlushwa, ukuhlushwa nokufa.
Le nhlangano yenkolo yokulwela yesimanje
Namuhla, anti-amaFascist - kukhona izinhlangano, izinhlangano kanye nemiphakathi njengoba inhloso yabo eyinhloko wokuqeda bonke ukuthambekela undlovukayiphikiswa, okuhlanganisa wobushiqela, nobuNazi, nebuhlanga, kutondza kwamaJuda, chauvinism futhi konke akunakubangelwa ukubandlulula. Ngezinye izikhathi abameleli isenzo wamanje, ngisho nangokumelene ne-capitalism.
Ikakhulukazi umbono ka anti-amaFascist ku amazwe asethuthukile Yurophu, lapho wonke "elivulekile ngomqondo" amafilosofi kunezimpande namandla kunomFilisti eRussia. Antifascists ukuvimbela yobuNazi banamuhla nokumasha, ukwabelana izinyembezi aphethwe kubo. Ngokuvamile kungashiwo ukuthi abameleli lezinhlangano aphikisanayo zinsumpa kusukela izinkinga ezibonakala bayenze, futhi ukuya empini nomunye ngqo, nobani ugcina ngegazi.
Ngokwesibonelo, 2009 kungase iphawulwe njengoba esibuhlungu ngo-Russian ukunyakaza anti-undlovukayiphikiswa, t intatheli. Ukuze. Labe wabulala Anastasia Baburova, ummeli Stanislav Markelov kanye isishoshovu Ivan Hutorskoy ngelika Bonecrusher. Ngamunye wabo imelele ukuzihlanganisa anti-undlovukayiphikiswa. Lezi izimo - kuphela iconsi olwandle, nokuhlaselwa kanye nomunye zokuphendula womshado ukuba nolaka nobudlova BANGA ubudlova. Ngakho, naphezu uyaphika anti-amaFascist, nokufa ngenxa yabo - ekwindla ka 2012 umfundi Alexander Dudin, ezasekela ukubukwa ubuzwe, endaweni skirmish encane ugwazwe esiswini. It akazange abe nesikhathi sokubuyisa esibhedlela, waze washona ngo-ambulensi.
Ngesikhathi intsha isitsotsi abaphikisi amaFascist ngokuthi Booms - kuyinto ultra, isizwe olukhulu, abalandeli okubizwa ngokuthi .. bonizma. Ngaphambili, kwakulula ukuthi azozibona - babephathwa izigilamkhuba izigilamkhuba ku tibia, kodwa namuhla lezi zici ehlukile axutshwa nabanye, futhi ngokuvamile, kancane wanyamalala. Amabhondi, wetha anti-amaFascist Shawky.
Ezweni lethu, i-anti-amaFascist - abantu lwemibono leyehlukene zezombusazwe yokungakholelwa, behlanganiswe umqondo ezivamile main. Namuhla, anti-amaFascist - amaKhomanisi, Socialists, izidlamlilo, Liberals ngisho Labo abakude futhi akuhlangene nezombusazwe; izigilamkhuba rappers punk subculture namanye amaqembu kwentsha. Bonke bathambekele khona amaqembu athile ezizimele ekhuthaza nokuthuthukisa ukunyakaza, okusekelwe ngezimali zabo namakhono - graffiti edwetshwe ezindongeni futhi hang amaphosta emnandi, usabalalisa ulwazi ku-intanethi noma kuvumelana izenzo kuhlelwe ngokugcwele. Ukuthi ukunyakaza Antifa agcwaliswa? Moscow, okuyinto ekuqaleni lalinabashumayeli abambalwa kakhulu abamele lo mkhuba, ngobuningi namuhla agxile indawo yako iqhubeke izinkulungwane anti-amaFascist, futhi lesi sibalo uyaqhubeka kuphela likhula.
Isibaluli eyinhloko anti-amaFascist kukhona amafulegi ezimnyama izishoshovu sebemukele "Isenzo Anti namaFascist" - ukunyakaza ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili, oyingxenye Rot Front eJalimane.
Amawebhusayithi, amaphephandaba nezinye izinsiza anti-amaFascist
Kuze kube manje, imithombo yendalo we-anti-amaFascist athuthukile ngempela ngokunamandla. Ngokwesibonelo, kukhona amakhasi ekhethekile ekuxhumaneni nomphakathi anikezelwe ukwethulwa okushiwo ukunyakaza, amawebhusayithi anarchist nayo kokucabangela le ndaba, futhi nakomagazini abahlukahlukene samizdat, omagazini namaphephandaba.
Trident Ukraine: uphawu lasendulo isimo
Abalingiswa bomdlalo Dragon Age: Liliana. I-Dragon Age: Umhlahlandlela we-Liliana
Minsk - Simferopol mzila wesitimela, intengo ithikithi
"Samprost": ukubuyekezwa kodokotela neziguli mayelana izidakamizwa